Colletif des normaliens de Madagascar Hiady ho an’ny tombontsoan’ny mpampianatra
Hiady ho an’ny tombontsoan’ireo mpampianatra namany ny “Collectif des normaliens de Madagascar”na ny fikambanan’ireo mpampianatra nahavita fiofanana izay nanatanteraka kongresy tetsy Ampefiloha ny sabotsy teo.
Nambaran’ny solontenan’izy ireo tamin’izany fa tsy mbola vita ny tolona ho an’ny mpampianatra mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Raha 500.000 Ar mantsy ny indemnité izay nangatahin’izy ireo tamin’ny Fitondram-panjakana dia vao 50.000 Ar monja hatreto no tonga eny am-pelatanan’izy ireo, izany hoe vao 10 % ka tsy maintsy hiady izy ireo. Tsy ahoanay, hoy izy ireo izay filoham-pirenena ho lany eo saingy tsy maintsy hiady kosa izahay ary efa miantso sahady ireo kandida roalahy mpifaninana goavana amin’ny fifidianana fihodinana faharoa mba ho vonona amin’izany. Tsiahivina fa mbola amin’ny alalan’ny fifampidinihina aloha no hisantaran’ireto collectif ireto ny dingana hataony amin’ny fitakiana. Hihaona mivantana amin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena izy ireo ka zavatra maro loha no entiny amin’izany. Anisan’ireny ny fampidirana ireo mpampianatra tsy voaray ho mpiasam-panjakana nefa nahavita fiofanana ara-dalàna. Eo ihany koa ny fitakiana ny indemnité, ny fanatsarana ny faripiainan’ny mpampianatra…. Nohamafisin’ireto collectif ireto fa hihamafy ny tolona ary tsy hijanona.